Vaovao - Tombontsoa ho an'ny fonosana mandeha ho azy sy ny milina fanaovana boaty
1. Ny fonosana automatique feno sy ny cartoning automatique dia mampihena ny vidin'ny mpiasa ary mitazona ny hafainganana, ny marina ary ny fitoniana.
2. Hatsarao ny famokarana asa. Ny hafainganam-pandehan'ilay milina fanaovana carton automatique dia haingana be noho ny fonosana amin'ny tanana.
3. Raha miasa mandritra ny fotoana maharitra ny fonosana amin'ny tanana, tsy maintsy hivadika izy io ary hiteraka fatiantoka tsy ilaina, izay azo sorohina be raha ampiasaina ilay milina fonosana. Na dia tsy 100% tsy misy hadisoana aza ny milina famonosana mandeha ho azy, dia ambany dia ambany ny tahan'ny lesoka.
4. Ny fonosana mandeha ho azy sy ny milina fanaovana carton dia azo tanterahina amin'ny tanana na sarotra tanterahina. Toy ny fonosana banga, fonosana inflatable, famenoana isobaric, sns.
5. Afaka manome antoka mahomby ny kalitaon'ny fonosana. Araka ny fepetra takiana amin'ireo entana fonosana, dia mety hisy toerana samihafa mba hiantohana ny kalitao aorian'ny fonosana.
6. Ny androm-piainan'ny milina famonosana amin'ny ankapobeny dia manodidina ny 6-10 taona talohan'izay, ary ny milina famonosana iray dia afaka manolo mpiasa am-polony mandritra ny fotoana lava sy asa mahery vaika, izay afaka mitsitsy vola be amin'ny famokarana ho an'ny orinasa.
7. Izy io dia miaro ny vatan'ny mpiasa, toy ny vokatra misy poizina, mahasosotra, radioaktifika ary manimba. Raha ampiasaina ny fonosana amin'ny tanana, dia tsy maintsy hiteraka fahavoazana amin'ny vatan'ny mpiasa izany rehefa mandeha ny fotoana, ary ny milina famonosana mandeha ho azy Azo sorohina.
Ny milina famonosana mandeha ho azy sy ny milina fanaovana boaty dia mihabetsaka eo amin'ny fiainantsika. Mihamaro ny orinasa mampiasa milina famonosana mandeha ho azy amin'ny fizotran'ny famokarana.